दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमाथि मतदानमा ढिलाइ « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
सोल, १६ मङ्सिर । दक्षिण कोरियामा काण्डबाट प्रभावित राष्ट्रपति पार्क गुन हेमाथि महाभियोगको प्रस्तावमाथिको मतदान कम्तिमा एक साताका लागि पछि सारिएको छ । उहाँले आफूले छिटै पदबाट हट्न चाहेको बताएपछि मतदानको कार्य पछाडि सरेको हो । राष्ट्रपति पार्कका आफ्नै दलका सांसदहरूले पनि उहाँमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए । हाल उनीहरूले यस विषयमा मतदान हुनुअगाडि छलफल गर्न चाहेका छन् । यस्तो छलफल एक सातापछि हुने हुनसक्नेछ ।
राष्ट्रपतिको ब्लु हाउसले पनि यस काण्डमा नयाँ चरणको अनुसन्धनमा उहाँले सघाउने र नयाँ नियुक्त विशेष अधिवक्ताले गर्ने सोधपुछमा उहाँ सहभागी हुने जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति पार्कमाथि उहाँका विश्वासपात्र चोइ सुन–सिलसँग मिलोमतो गरेको र चोइको व्यक्तिगत फाइदाका लागि संस्थाहरूलाई लाखौँ डलर चन्दा दिन बाध्य पारिएको अरोप लगाइएको छ । उहाँले यस विषयमा संसदलाई निर्णय गर्न दिइने बताउनुभएको छ ।
यस अनुसन्धानमा राष्ट्रपति पार्कलाई आशङ्कित व्यक्तिको रूपमा लिइएको छ र फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानमा पर्नुभएका उहाँ पहिलो वहालवाला राष्ट्रपति बन्नुभएको छ । उहाँले प्रत्यक्ष भिडियो सम्बोधनमा सांसदहरूले शक्तिरिक्तपना कम गर्न तथा शासनमा अराजकता हुननदिने अवस्था सिर्जना गरी शक्ति हस्तान्तरणको अवस्था सिर्जना गरे आफू पदबाट हट्ने बताउनुभयो ।
उहाँका आलोचकहरूले भने उहाँले महाभियोगको प्रयासलाई ढिलाइ गर्न उक्त प्रयास गर्नुभएको आरोप लगाएका छन् ।उक्त सम्बोधनले उहाँकै साएनुरी पार्टीका केही सदस्यको चित्त बुझेको देखिएको छ र यसले प्रतिपक्षी दलको प्रयासमा बाधा उत्पन्न गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
मुनह्वा इल्बो दैनिकले साइनुरीका करिब ३० सांसदले पहिले राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्ने बताए पनि उहाँको सम्बोधनपछि उक्त कुराबाट पछि हटेको जानकारी दिएको छ । प्रतिपक्षले राष्ट्रपति पार्कले तत्कालै र कुनै पनि सर्त नराखी पदबाट हट्नुपर्ने अडान लिएको छ भने उहाँप्रति समर्थन जनाउनेले नियमित रूपमा उहाँको पलायन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
राष्ट्रपति पार्कलाई पदमा रहँदासम्म देशद्रोह बाहेक फौजदारी अभियोग लगाउन सकिन्न तर उहाँ पदमुक्त हुनुभएपछि त्यसो गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति पार्कले बुधबार प्रतिपक्षको नियन्त्रणमा रहेको संसदले सिफारिस गरेको एक स्वतन्त्र अधिवक्तालाई उक्त काण्डमा छानविन गर्न दिने कुरामा सहमति व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विशेष अधिवक्ताले राष्ट्रपति पार्कसँग अन्तर्वार्ता लिनेछन् र सरकारी अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धानको आधारमा १२० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् । यसअघि राष्ट्रपति पार्कले आफूमाथि सोधपुछ गरिने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो । एएफपी
फेसबुकमा भेटीए लगत्तै प्रेमीसँग विबाह गरिन् मालाले, ४ महिनाको गर्भसहित दाइजो दिएको सुटकेसमा भेटियो उनको शव
काठमाडौँ । फेसबुके मित्रता र प्रेममा यौन र धोकाको मात्रा..
एजेन्सी-भारतमा आफ्ना प्रेमीसँग एक होटलमा पुगेकी युवतीको सेक्स पावरको औषधीको..
लालु यादवका छोराले ऐश्वर्या रायसँग बिहे गर्दै, संयोगले भएको भेटपछि बिहेमा परिणत भयो यि दुई सम्बन्ध
एजेन्सी। भारतका पूर्व केन्द्रीय मन्त्री लालुप्रसाद यादवका छोरा तेजप्रताप यादवका..
आकाशमा चीनको नयाँ शक्ति !
चीन र अमेरिकाबीच जारी ‘व्यापार युद्ध’पछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले..
रियो दि जेनेरियो, २९ चैत । ब्राजिलको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको..
आफ्नो सन्तानको माया कसलाई हुँदैन ? संसारमा सबैभन्दा प्यारो अविभावकलाई..
स्वदेशमा उत्पादित जडीबुटी प्रयोग गर्नुपर्ने – वनमन्त्री